????? / 0.00 DKK 0
?????? / ategorရာဝတီ
6 ?????????????????????????????? ???????5??? 5.00 ?????????????????????
Nordic Cosmetics Facial Serum ? CBD & Hyaluronic Acid ????????
???????????????? CBD BALMS CBD ဆေးတောင့် CBD အလှကုန်ပစ္စည်း CBD ခရင်မ် CBD အခြေခံမူ CBD Elixir သွားဖုံး CBD EXTRACTS အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက် CBD cbd mani nordic oil CBD Offers CBD Oil – Cannabis Oil CBD ရေနံ e- အရည် cdd-drop mani drops nordic oil Nordic cosmetics Nordic Cosmetics Eye Cream ategorရာဝတီ
Nordic အလှကုန်မျက်နှာမျက်နှာရည်ကြည် CBD နှင့် hyaluronic acid သည်လတ်ဆတ်သောလူငယ်နှင့်တောက်ပသောအသားအရေကိုရရှိစေသည်။ မျက်နှာ၏သွေးရည်ကြည်တွင်သက်သတ်လွတ်များပါဝင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောရောစပ်မှုပါဝင်သောအရာများသည်အရေပြားကိုသဘာဝသစ်များပြန်လည်ထူထောင်ပေးခြင်းကိုအထောက်အကူပြုပြီးတောက်ပသောအလင်းရောင်ကိုရရှိစေသည်။ Nordic အလှကုန်မျက်နှာမျက်နှာရည်ကြည် အသားအရေကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရန်လိုမှုမှကာကွယ်ပေးသောအေးဆေးတည်ငြိမ်သောအအေးခံစွမ်းအားရှိသည်။ သွေးရည်ကြည်တွင်ဗီတာမင်စီနှင့်အီးပါ ၀ င်ပြီးအသားအရေကိုလတ်ဆတ်သောပုံပေါ်စေသည်။ CBD သည်အစွမ်းထက်သောရှားစောင်းလက်ပတ်နှင့်ပေါင်းပြီးခြောက်သွေ့။ အသားအရေခြောက်သွေ့စေရန်သဘာဝဆေးတစ်လက်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ သာယာသောနှင့်သဘာဝအမွှေးအကြိုင်တစ်ခုလုံးတစ်ခုလုံးတွင်ရှိသည် Nordic အလှကုန်ထုတ်ကုန်များ, invigorates the senses and intensifies the care experience. Nordic cosmetics facial serum contains 60mg of synthetic CBD crystals, which are free of GMO. This substance has not been tested on animals, nor evaluated for safety through animal testing. Nordic Cosmetics Facial Serum was rated ?excellent? by Dermatest. Contains 30 ml. Suitable for all skin types Can be used with make-up Made in EU
Aqua, ရှားစောင်းလက်ပတ် Barbadensis အရွက်ဖျော်ရည်၊ Polysorbate 20, Glycerin, Sodium Ascorbyl Phosphate, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Cannabidiol, Parfum, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium Hydrocodium, Tetrasodium ဒိုင်အောက်ဆိုဒီယမ်ဒိုင်ဒီတိုဒီယမ်ဒြိတ်ဒိုက်ဒီဒိုက်ဒီဒိုက်ဒီဒိုက်ဒိုက်ဒိုက်ဒိုက်ဒိုက်ဒီဒရောဒီဒရောဒီဒိုက်ဒိုက်ဒိုက်ဒီယဒီနိုက်ဒရောဒိုက်ဒိုက်ဒီယမ်ဒိုက်ဒီဒီယမ်ဒိုင်ဒီယိုဒိုင်ဒီယွန်ဒီယမ်ဒိုင်ဒီယိုဒိုင်ဒီယွန်ဒီယမ်၊
Nordic Cosmetics Facial Serum ? CBD & Hyaluronic Acid ?????6???????????????????
5 ???5??????????????????
တစ်ယောက်တည်း - 25. ???????? 2020
လူအကြီးအတစည်း; တကယ်ကိုအထောကျအကူ, အသိပညာနှင့်ကောင်းသောထုတ်ကုန်။
ဂျူလီယန် ND - 25. ???????? 2020
OrganicHemp ဟာတောက်ပပါတယ်။ ဆိုင်သည်တောက်ပ။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သည်။ Lewis ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ တတ်ကျွမ်းတယ်၊ ဖော်ရွေတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဝက်ရူးပြန်ရောဂါအတွက်ကျွန်ုပ်၏ CBD ဆီနှင့် CBD တက်ဘလက်များကိုအမြဲတမ်းရနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်စျေးနှုန်းချိုသာတဲ့စျေးနှုန်းသက်သာတယ်။
Marlies - 25. ???????? 2020
Schnelle Lieferung, စူပါ Produkt
လီ - 25. ???????? 2020
လျင်မြန်ပြီးကောင်းသော ၀ န်ဆောင်မှု x
ritta Hanson - 25. ???????? 2020
ပိုက်ဆံအတွက်အလွန်တန်ဖိုး။ ၀ န်ဆောင်မှုသည်နောက်တစ်နေ့တွင်ဖြန့်ဝေပေးခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
Hanna - 30. ???????? 2020
sehr အူ danke
?????????????????????? ?????? ?????????
??????????????????????? * ????????????????? ??????????????? ????????? ???????? ?????????? ??????????????
5 ??? 5.00 ??????????????????